Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Computer ရဲ့ Screen ပေါ်ကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှတ်တမ်းယူထားပေးမယ့် - ZD Soft Screen Recorder v11.0.9 + Keygen ♫
♪ Computer ရဲ့ Screen ပေါ်ကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှတ်တမ်းယူထားပေးမယ့် - ZD Soft Screen Recorder v11.0.9 + Keygen ♫
PC ပေါ်မှာလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို Video Record အဖြစ်ဖမ်းယူထားပေးနိုင်တဲ့ ZD Soft Screen Recorder v11.0.9 နောက်ဆုံးထွက် Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာ Screen recording software program လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Video Resolutions နှင့် Frame Fates တွေကိုလည်းကိုယ်လိုသလိုဖျတ်တောက်ရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။ recording ရဲ့ အချိန် ကြာမှု့ကိုတော့ ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူး။ PC game screen တွေကအစရိုက်ယူနိုင်ပြီး audio/video ကို မိမိကြိုက် သလိုပြောင်း လဲနိုင်ပါတယ်။Full ဖြစ်စေဖို့အတွက် Keygen ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်လေ့ လာနိုင်ဖို့ အတွက်အာက်မှာ ရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။
ZD Soft Screen Recorder Crack isahandy and comprehensive application which captures what you see on screen and what you hear or say. It is usually used to create software demos, capture streaming videos and record game plays.
You can save your recordings and screen captures to various video and image formats, then you can addawatermark to the output files.
Also Capable of capturing OpenGL, DirectDraw, Direct3D 8/9/10/11 rendered screen content.
And Capable of capturing multiple audio sources at the same time, e.g., both speaker and microphone.
And Capable of capturing screenshots byahotkey.